UDkt Ugur Sahin noDkt Özlem Türec – ososayensi abagqekeze ikhodi ye-Covid ngejubane elincane | Scrolla Izindaba
UDkt Ugur Sahin noDkt Özlem Türec – ososayensi abagqekeze ikhodi ye-Covid ngejubane elincane
Ngezikhathi zasekuseni mhla ziyisishiyagalolunye kuLwezi kowezi-2020, izwekazi lonke laphefumula ngokubambisana. Ngemuva konyaka wezinhlungu, isizungu nobunzima bezomnotho, ukuphela kwase kuseduze. Umuthi wokugoma osebenzayo we-Covid-19 utholakele.
Ososayensi abenze lo mkhankaso nguDkt Ugur Sahin noDkt uÖzlem Türeci, ithimba lemyeni nenkosikazi elivela e-Turkey.
Lezi zithandani zimemezele ukuthi iqembu labo lenze umuthi wokugoma osebenza ngaphezu kwamaphesenti angama-90 ekuvikeleni lesi sifo.
Wenziwe yi-Pfizer nenkampani kaDkt uSahin ye-BioNTech, umuthi wokugoma njengamanje usakhishwa emazweni amaningana, kubandakanya i-US, i-UK kanye ne-Malaysia.
Yize kuneminye imithi yokugoma eqhamuka ngokushesha, umphumela omangazayo womsebenzi kaDkt.Sahin noDkt Türeci usisondeza kwelinye igxathu ekuphiliseni lesi sifo esesibulale abantu abangaphezu kwabazigidi eziyi-1.6 emhlabeni jikelele futhi impela bekungukuphazamiseka okukodwa okukhulu impilo yansuku zonke kusukela ngeMpi Yezwe Yesibili.
NgoMasingana uDkt uSahin wayesazi vele ukuthi igciwane elalisakazeka ngokushesha kulo lonke elase-China lizoqhuma libe ubhabhane lomhlaba wonke. Yena, uDkt uTüreci kanye nethimba labo ngokushesha bakhansela izinhlelo zabo zonyaka wonke futhi baqala ukusebenza kwi-Project Lightspeed efanelekile.
Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye kamuva, ngomfumfu, uDkt uSahin wazindla ngalokhu okwenzeka engxoxweni: “Akuzange kube njengethuba, kodwa kungumsebenzi ukukwenza, ngoba ngabona ukuthi singaba phakathi kwabokuqala abeza nomuthi wokugoma.”
Owayekade eyisibopho kuDkt uSahin noDkt uTüreci kwakuwumsebenzi womhlaba wonke wokukhanya kwethemba ngemuva kokuthi unyaka uchithwe ngesifo esibulalayo.